Njikwa Arsiv - RayHaber
HABERTURK, ga-akara ụbọchị ọhụụ nke nnukwu ọrụ na Ankara, kwupụtara nkọwapụta nke okporo ụzọ ana-eme na Ankara. Otu ụlọ ọrụ China ga-eso Ankara mee nkata maka usoro ụgbọ elu “ọsọ ọsọ” nke a ga-ewute na Yavuz Sultan Selim Bridge ma ga-erute Sakarya. [More ...]
A na-emezigharị Ọdụ Sakarya Bridge
Ọrụ mmeghari ohuru na akwa akụkọ Sakarya na-aga n'ihu. Ihicha ahihia na ahịhịa n’elu àkwà mmiri ahụ, iwepu ụzọ ụgbọ okporo ígwè ahụ, wụnye ụgbọ okporo ụzọ ọhụrụ n'otu ụzọ ahụ, ịrụzi ihe na obere nsogbu dị n’elu ala. Sakarya Obodo ukwu nke Science Affairs [More ...]
KARÇEL 1915 bidoro Nkwado Iwu nke Bridgeanakkale Bridge
Karabük Iron na Iron Factories (KARDEMİR) AŞ. 1915 Çanakkale Bridge, akwa agbachitere kachasị ogologo n'ụwa, mara ọkwa maka mmepụta 500 ton Support Frame. Dabere na nkwupụta nke KARDEMİR KARÇEL'in gosipụtara mmepụta ihe mgbochi ụwa kachasị kwụsị ụwa [More ...]
Nounma ọkwa Akwa na wayzọ Mgbapụta
Nounma ọkwa Akwa na wayzọ Mgbapụta. 906 nde 252 puku 712 pound si akwa na okporo ụzọ na Jenụwarị-June oge data sitere na General Directorate of Highways, 15 na Istanbul July Martyrs na Fatih Sultan Mehmet àkwà mmiri. [More ...]
4. Onu ahia ahia uwa maka Okporo Ụzọ, Okpughari na Ala
The ụzọ malitere ime, na-eme ya inweta bụla akụkụ nke Turkey, taa ụwa anya na mmejuputa mega-oru ngo na-achọ sochiri elu uzu na ego, mba anyị emewo kwagara n'ihu ụwa iga oru. Mgbanwe na mmepe na ụwa [More ...]
Ozi nke njem na-enyeghị Mpempe ọkụ ọkụ maka arịrịọ IMM
IMM, Yavuz Sultan Selim Bridge na Eurasia Tunnel ụnyaahụ mara ọkwa na ha ga-achọ iji belata ọnụ ọgụgụ. Ministri nke Ụgbọ njem rịọrọ ka Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) rịọ ka e belata ụfọdụ ihe gafee. [More ...]
Eletriki, tii, shuga na ikuku mmiri na-ekpuchi na osisi ike, afara na ụzọ okporo ụzọ na-eduga ná ntụgharị. A ga-eme ka usoro 15 July na Fatih Sultan Mehmet na okporo ụzọ okporo ụzọ ruo mgbe ngwụsị afọ gafere. Ndi oru aka [More ...]
Nkwupụta FSM obodo nke Istanbul Metropolitan Municipality: 'Oge Mbupu Oge Metrobus Gbanyere n'Oge Ochie'
Obodo ukwu nke Istanbul ga-arịọ Minista Ụgbọ njem ka ọ belata ọnụahịa ejiji nke Yavuz Sultan Selim Bridge na Eurasia Tunnel iji nye ụzọ ọzọ dị iche iche na ndị Istanbul na-eji Fatih Sultan Mehmet Bridge na 15 July Martyrs Bridge n'oge arụ ọrụ ha. [More ...]
Ọwara Eurasia na 3. Ọ bụ ezie na akwa ahụ bụ otu ihe ahụ
Ọrụ na-arụ ọrụ na Fatih Sultan Mehmet Bridge mere ka Istanbul okporo ụzọ dị egwu. N'ime afọ ndị gara aga, a na-echekwa akwa ahụ na okporo ụzọ bụ otu, ma n'oge a enwere ihe dị iche. Ọwara Eurasia na Nke atọ na Istanbul [More ...]
Echechiri FSM! Mmetụta dị na Metrobus Stops Tụgharịa gaa Nightmare
Ọmụmụ ihe ahụ, nke Ngalaba Ụgbọ njem malitere na Fatih Sultan Mehmet Bridge ma chee na ọ ga-agwụ ngwụcha ụbọchị 52, okporo ụzọ Istanbul kpọnwụrụ akpọnwụ. Site na ịnyefe IMM na tarifụ okpomọkụ n'ime njem ọha na eze, ọrịa ahụ ejiriwo okpukpu abụọ. Ụmụ amaala na-agba ọsọ n'okporo ụzọ awara ụgbọala ha [More ...]
FSM na 15 July Martyrs 'Bridge Statement from the Ministry of Transport
Ministry of Transport and Infrastructure 15 July Martyrs 'Bridge adịghị arụ ọrụ na niile lanes na-emeghe ka ọrụ azụmahịa mara ọkwa. Ihe edere ederede nke Ministry of Transport and Infrastructure kwuru dị ka ndị a; "N'akụkụ ụfọdụ mgbasa ozi, Fatih Sultan [More ...]
İBB President Ekrem İmamoğlu kwuru na okporo ụzọ a rụpụtara na Fatih Sultan Mehmet Bridge wee kwuo, konusunda Ọrụ anyị banyere otu esi edozi nke a ga-agwa General Directorate of Highways. Dị ka ọ dị taa, anyị etinyela ya na ihe omume anyị dịka mbipụta ọsọ ọsọ nke Istanbul " [More ...]
Imepụta Ọkụ Mmiri Semetler
Obodo ukwu dị na Kocaeli, na-aga n'ihu iji rụọ ọrụ iji mee ka ụmụ amaala bi n'ógbè ha dị mfe. N'ebe a, ihe owuwu nke ụzọ gafere na ụzọ ndị ọzọ na-aga n'okporo ụzọ dị n'etiti Karamürsel district center na Semetler Village na-aga n'ihu. Ogige ntụrụndụ [More ...]
Ọnụ ọgụgụ nke ụgbọ ala na-agafe na ntụgharị na ọwara Eurasia belata: "2019 Bill 3 Billion Pound"
N'agbanyeghi nbubata nke June, Ministry of Transport and Infrastructure ekwuputaghi onu ogugu [More ...]
Obodo ukwu dị na Kocaeli, nke dị mkpa maka ọrụ njem na isi ụlọ na mpaghara district, na-aga n'ihu ọrụ iji mee ka njem nke ụmụ amaala bi n'ógbè ndị dịpụrụ adịpụ gafee. Na nke a, njikọ dị n'etiti Körfez District Çıraklı Quarter na Çavuşlu District nke Derince District [More ...]
Osmangazi nke dị n'akụkụ aka ekpe
Ụmụ amaala ndị gara ezumike ezumike bụ ọdụ ụgbọ mmiri Eskihisar. Ejupụta okporo ụzọ dị elu na nkume ahụ, ebe ụmụ amaala anaghị ahọrọ Osmangazi Bridge na otu ụzọ nke 103. Ụmụ amaala Ramazan ndị na-elele ezumike ezumike site na Istanbul [More ...]
Setịpụ 'Nkwadebe na Osmangazi Bridge
Yavuz Sultan Selim Yildirim na àkwà mmiri, Eurasia Ọwara na Istanbul-Izmir okporo ụzọ na Northern Environment, mere onwe oru-na-arụ ọrụ-nyefe (BOT) nlereanya e wuru na. N'ime ọrụ ndị a, a na-eme ka ndị na-egwu ụgbọala dị ka mgbanwe mba ọzọ. KWESỊRỊ ỤLỌ AKA NA-AKWỤKWỌ Ụgbọala, nke a [More ...]
Gịnị Ka Ihe Ndị A Mega Ga-abụ?
Kedu ihe anyị ga-eme n'ebe na-adịghị mma, ọdụ ụgbọ elu dị egwu na-abaghị uru? Ọ bụrụ na ị gaghị agbaji, ị na-eme nke ọhụrụ, ị kwụrịrịrịrị ụgwọ ikike ụgbọ njem ahụ. Otu ihe ahụ na-aga maka ala mmiri na ebe a na-agba mbọ. Ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa ịzụ ahịa n'ụlọ ọgwụ [More ...]
Ejiri Ala Osmangazi kwụọ ụgwọ maka ememe?
A ga-akwụ ụgwọ site na Osmangazi Bridge na ezumike. Yavuz Sultan Selim Bridge (3 Bridges), Osimiri Eurasia, na-ejikọta Osimiri Gulf na Osmangazi Bridge na okporo ụzọ ya. [More ...]
Minista na ụgbọ mmiri Mehmet Cahit Turhan, General Directorate of Highways (KGM) nke okporo ụzọ na okporo ụzọ ji arụ ọrụ, 10 June ga-enwere ohere ruo mgbe 07.00 kwusara. Ụgbọ njem na ihe ndị bụ isi Cahit Turhan, ezumike nke Ramadan ga-amalite dị ka echi, [More ...]
Nhazi ọhụrụ site na IMM ka Bridge Transitions
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ụgbọ njem (UKOME), nke Hayri Baraçlı, bụ odeakwụkwọ ukwu nke Istanbul Metropolitan Municipality, na-achị, weghaara mkpebi nke klaasị ụgbọala site na iji Bosphorus Bridges. Mgbe ịchisịrị ndebanye aha ahụ, usoro ọhụrụ ahụ abanyewo ike taa (31.05.2019). Na nzukọ UKOME; Ibu Ibu Max [More ...]
Ndị nzuko omeiwu gafere iwu nke nzuko omeiwu nke AKP nyere nzuko omeiwu tupu a ga - enwe ntuli aka na June na Istanbul. Ihe 23 AKP nyere AKWỤKWỌ n'ihu Mgbakọ tupu ntuli aka nke obodo obodo Istanbul na June [More ...]
Obodo ukwu nke Erzurum na-aga n'ihu ịzigharịa ma melite netwọk ụgbọ okporo ígwè. Obodo ukwu obodo, obodo abụọ dị iche iche nke arụ ọrụ, nke ga-eru na njedebe nke ọ bụla ọzọ. 75 mita ogologo oge, 50. Year Street na Sükrüpaşa Dadaşköy [More ...]